Qalabka Fududeynta Fiilooyinka, Waxyaabaha Buuxinaya, Cajaladda Dahaarka - HAL ADUUN
Semi-Iskudhiska Filler Xarig
Focus on silig iyo xallinta fiilada
Ka caawi horumarinta wabiga siligga iyo fiilada
Macaamiil marka hore
Ku hogaaminaya tiknoolajiyadda ugu horumarsan
Farsamayaqaannadeena gaarka ah ee tikniyoolajiyada wax soo saarka, sidoo kale iskaashi la leh xarunta cilmi baarista xarigga iyo fiilooyinka, asxaabta, si loo horumariyo siligga iyo qalabka fiilooyinka oo leh waxqabad wanaagsan iyo qiimo jaban.
Tijaabooyin bilaash ah oo tijaabada ah (oo aan ku jirin walxaha macmalka ah)
Ka caawi macmiilka inuu doorto maaddada saxda ah
Baadhitaanka agabyada dhammaaday ka hor rarka
Gaarsiin Deg Deg ah
Badanaa, badeecadaha waxaa lagu geyn doonaa 7 illaa 15 maalmood gudahood ka dib xaqiijinta amarka.
2 Tan oo Aramid Yarn ah ayaa loo diray Vietnam
Waxaan ku faraxsanahay inaan la wadaagno inaan kaliya 2 tan oo Aramid Yarn ah u gaarsiinnay macaamiisheena Vietnam. Aramid Yarn waxaa badanaa loo isticmaalaa sidii loo xoojin lahaa biraha aan fiilooyinka lahayn ee fiilooyinka indhaha ee ADSS, fiilooyinka indhaha ee aan birta ahayn iyo fiilooyinka indhaha. (Baakadaha Armaid Yarn) Macaamiilkani waa macmiil nagu cusub. Ka dib markaan si taxaddar leh u barbardhigay xuduudaha farsamada iyo qiimaha, iyo tijaabinta shay-baarka bilaashka ah ee aan bixinnay, waxaan ugu dambeyn gaarnay iskaashi. Waxaan aaminsanahay in wadashaqeynteenu mustaqbalka ay noqon doonto ...
Maraakiibta Dahaarka Dahaarka ah ee Dahaarka Dahaarka ah
Bishan, One cable cable ayaa u dirtay Algeria qaybo kale oo silig naxaas ah oo daasad ah. Siligga siligga ah ee dahaarka ah ee daasadda ah ee daasadda ah ayaa badanaa loo isticmaalaa fiilooyinka macdanta caag ah, fiilooyinka jilicsan, fiilooyinka jilicsan iyo fiilooyinka marinada sida udub dhexaadka siligga, waxaana loo isticmaalaa sida lakabka gaashaanka dusha sare ee xarigga iyo xarigga burushka siligga siligga ah ee siligga ah ee dahaadhay lakabka dusha sare ee silig xayiran oo naxaas ah si looga hortago oksaydhka silig naxaas ah. Waxaan soo saarnaa daasadaha ...
12 Tan oo ah Mylar Cajalado ayaa loo diray Filibiin
Waxaan ku faraxsanahay inaan la wadaagno inaan hada u dhiibnay 12 tan oo cajalado cajalado ah macaamiisheena oo ka yimid Filibiin. Tani mar labaad waa amar soo noqosho, macaamilku waligiis wuxuu iibsadaa cajalado kale oo cabbir kale leh ka hor, waxay gartaan tayada wax soo saarkeenna iyo awooddeenna wax-soo-saar aad u badan, maxaa yeelay waxaan bixin karnaa dhumuc kasta oo cajalad caag ah oo macaamiisha u baahan yihiin, laga bilaabo 10um illaa 100um, cabir kasta waa loo habeyn karaa iyadoo loo eegayo shuruudaha. Intaa waxaa dheer, waxaan bixinnaa tartan aad u adag ...